श्वेताले प्रेमीसँग विबाह गर्नैलाग्दा श्रीकृष्णको नामबाट लेखिएको मनछुने यो पत्रले कसको मन नछोला,नरोला ! – नेपाली सूर्य
December 5, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on श्वेताले प्रेमीसँग विबाह गर्नैलाग्दा श्रीकृष्णको नामबाट लेखिएको मनछुने यो पत्रले कसको मन नछोला,नरोला !
अग्निलाई साक्षी राखेर ३३कोटि देवताको कसम खाएर एकअर्काको सुखदुःखमा साथ दिने भनेका थिof} ।तिमिले त त्यो कसम निभाए पनि मेरो सुखको घडी होस या दुखको घडी तिमी मेरो साथमा मेरो अन्तिम सास सम्म रहिरहेउ।मेरा यादमा जीवन जिउनु सजिलो पक्कै पनि भएन होला तिम्लाई मैले छाडे पनि जिवनमा आईपर्ने समस्याहरुले तिम्लाई छाडेनन होला । सुरुसुरुमा अब तिमिले अर्को विवाह नगर्ने अरे भनेको सुन्दा अलिअली खुसी तर धेरै पिडाको अनुभुती हुन्थ्यो । मृत्यु संगको लडाई मेरो एक्लो लडाई थिएन त्यहा हामी मिलेर लडेका थिएउ यदि म एक्लै लड्दो हु त कोहिनूर(श्रीकृष्णको अन्तिम चलचित्र) मा सायद हामी हुने थिएनौ!
देवदह भलुहीमा पिकअप भ्यानले मोटरसाइकललाई ठ’क्कर दिदा निरजको मृत्यु